थाहा खबर: काठमाडौंमा एमालेलाई ७ र माओवादीलाई ३, हेर्नुहोस् कुन क्षेत्र कसलाई?
काठमाडौंमा एमालेलाई ७ र माओवादीलाई ३, हेर्नुहोस् कुन क्षेत्र कसलाई?
स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुले पाएको मत
काठमाडौं : एमाले र माओवादीले एक सातादेखि प्रयास गरे पनि निर्वाचन क्षेत्र र सिट बाँडफाँट टुंग्याउन सकेका छैनन्। सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने सहमित सहित वाम गठबन्धनमा सामेल नयाँ शक्तिले पाउने सिटका विषयमा त छलफलसमेत भएको छैन।
गठबन्धनमै आउने तयारीमा रहेका नेकपा माले र राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्र र प्रदेशमा पाउने क्षेत्र र सिटबारे पनि अन्योल छ। तीन दिनपछि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै क्षेत्र बाँडफाँट टुंग्याउनुपर्ने दबाब दलहरुलाई छ।
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बुधाबर प्रदेश ज्ञ बाट छलफल सुरु गरिए पनि टुंगो नलागेको बताए। '१ नम्बर प्रदेशबाट प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ,' उनले भने, 'केही जिल्लामा निष्कर्षनजिक पुगेका छौं, केही जिल्लाको टुंगो लगाउन बाँकी छ। बिहीबार फेरि छलफललाई निरन्तरता दिने गरी बैठक स्थगित भयो।'
काठमाडौंका १० क्षेत्रमध्ये एमालेले ७ र माओवादी केन्द्रले ३ क्षेत्र लिने समझदारी भएको छ। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ एमालेले २, ३, ४, ५, ७, ८ र ९ तथा माओवादी केन्द्रले १, ६ र १० नम्बर निर्वाचन क्षेत्र लिने समझदारी बनेको छ। यसअघि माओवादीले ४ क्षेत्र दाबी गर्दै आएको थियो।
राष्ट्रगौरव पदकका लागि सरकारले भेटेन उपयुक्त पात्र
काठमाडौं : यस वर्ष राष्ट्रगौरव पदकबाट कोही पनि सम्मानित नहुने भएका छन्। उक्त पदकका लाग उपयुक्त पात्र नभेटिएको भन्दै सरकारले कसैको पनि नाम सिफ...
पर्सामा १६४ सीमास्तम्भ गायब
वीरगज : भारतसँग सीमा जोजिएको पर्साको धोबिनीदेखि ठोरी गाउँपालिकासम्म गाडिएकामध्ये थप ५५ सीमास्तम्भ गायब छन्। गत बैशाखमा वीरगञ्जमा नेपाल&n...
सरकारी खर्चमा श्रीमतीसहित महानगरप्रमुख अमेरिका भ्रमणमा
काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा नियन्त्रण गरेको बताइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्द शाक्य सरकारी खर्चमा श्रीमती लिएर...
तीन हजार विद्यालय दरबन्दीविहीन
काठमाडौं : सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण नुहँदा देशभरका ३२ प्रतिशत विद्यालयमा एक शिक्षक बराबर २० जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको ...
लखेट्दै लगेर बलात्कार
काठमाडौं : चारजना किशोरकिशोरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वारमा रहेकी दिदीको घरमा हिंडे । उनीहरु १२ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका ...